(SAWIRRO) Tartankii qur’aan akhriska Puntland oo lasoo gabagabeeyay (Yaa ku guulaystay?) | puntlandi.com
(SAWIRRO) Tartankii qur’aan akhriska Puntland oo lasoo gabagabeeyay (Yaa ku guulaystay?)
Garowe (Puntlandi) Sakariye Warsame Axmed oo ka socday degmada Carmo ayaa ku guulaystay tartanka Qur’aan Akhriska soddonka Juz ee heer Puntlandee heer Puntland, waxaana la guddoonsiiyay gaari Noha ah iyo abaal marino kale.
Sidoo kale, juska 20-aa, waxaa ku guulaystay Ismaaciil Cali Cumar oo ka socday degmada Qardho ee gobolka Karkaar, juska 10-aadna waxaa ku guulaystay ardayda ka socday degmada Bosaso halka juska 5-aad uu ku guulaystay arday ka socday degmada Waaciye ee gobolka Karkaar.
Tartankaan oo sannad kasta la qabto bisha Ramadaan ayna soo qaban qaabisay mu’asasada Alminhaaj, ayaa loo qabtay 12 degmo oo katirsan Puntland, waxaana matalayay 38 arday, inkatsoo labo arday oo ka socday degmada Dangorayo ee xanuun uga hareen.
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland, ahna ku simaha madaxweynaha, Eng, Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey, ayaa soo xiray tartankaan, waxaana uu u mahad celiyay cid walba oo tartankaan ka qeyb qaadatay maalgalintiisa iyo dhiir galintiisa.
Dhammaan ardaydii kaalimaha ka galay tartankaan, ayaa la guddoonsiiyay abaal marino kala duwan oo ay ku mutaysteen dadaalkoooda xifdinta qur’aanka kariimka. Waxaa kaloo abaalmarino la guddoonsiiyay shirkadihii ka qeyb qaatay maalgalintiisa.